गठबन्धनका विरुद्धमा भोट हाले देश ठूलो दुर्घटनमा जान्छ : प्रचण्ड
जनआन्दोलन २०४६ मा रुख र हँसिया हथौडा​सँगै हिँड्नु हुँदैनथ्यो ? के २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बेला रुख र हँसिया हथौडा​सँगै हिँडेको गलत थियो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अन्तिम समयसम्म पनि शान्ति सहकार्य र एकताको कुरा गरेको स्मरण गरे । उनले रुखवालालाई चितवनमा हँसिया हथौडामा भोट हाल्न सकस भएकोले वाम गठबन्धनतिर गएको उल्लेख गरे ।
प्रचण्डले अघिल्लो चुनावमा चितवनमा काँग्रेससँग गठबन्धन गर्दा रुखवालाले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न नरुचाएका कारण शेरबहादुर देउवालाई सोधेर नै बाम गठबन्धनमा जान्छु भनी नढाँटीकन गएको बताए । उनले बाम गठबन्धनमा गएपनि केपी ओली प्रवृतिको विरुद्ध लड्न १९ बुँदे पत्र आफूले दिएको उल्लेख गरे ।